के हो केरलाका ८० प्रतिशत बालबालिका प्रभावित भएको टाेमाटाे फ्लू भाइरस ? – Health Post Nepal
के हो केरलाका ८० प्रतिशत बालबालिका प्रभावित भएको टाेमाटाे फ्लू भाइरस ?
२०७९ वैशाख २८ गते १४:४२
नयाँ दिल्ली-दक्षिणी भारतीय राज्य केरलामा टाेमाटाे फ्लू भाइरस फेला परेको छ। सिगेला ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दा फुड पोइजनिङका घटना बढिरहेका बेला केरलाका धेरै जिल्लाहरूमा टाेमाटाे फ्लू भाइरस फेला परेको हो।
दुर्लभ भाइरल रोगका कारण केरलाका पाँच वर्षमुनिका ८० प्रतिशत बालबालिका प्रभावित भएका छन्। केरलाको एउटा जिल्लामा फ्लू फैलिएपछि त्यसविरुद्ध लड्न तमिलनाडु र केरलाको सीमामा रहेको वालेरमा चिकित्सकहरूको टोलीले ज्वरो, दाग र अन्य रोग जाँच गर्ने भएको छ।
टाेमाटाे फ्लू ?
टाेमाटाे फ्लूका कारण दाग, छालाको जलन र डिहाइड्रेसन हुन्छ। याे भारतमा सबैभन्दा गलत निदान गरिएको संक्रमण हो। फ्लूको नाम गाेलभेंडाकाे आकारको दाग उत्पन्न हुने रोगबाट भएको हो।
बालबालिकाको छालामा जलन, बिमिरा आउनु, हात र खुट्टामा रातो दाग देखिनु यस रोगका लक्षण हुन् । त्यस्तै भाइरस लागेका बालबालिकामा ज्वरो आउने, डिहाइड्रेसन हुने, खोकी तथा चिसो महसुस हुने र पखाला लाग्ने यसका लक्षण हुन् ।